“Markii aanu Madaarradii hagaajinay waxa imanaysa Turkish Air-ways oo ku Soo Dhiiratay ” | Somaliland.Org
“Markii aanu Madaarradii hagaajinay waxa imanaysa Turkish Air-ways oo ku Soo Dhiiratay ”
January 16, 2013	Hargeysa (Somaliland.Org)- Wasiirka Duulista Hawadda Somaliland Md Maxamuud Xaashi Cabdi, ayaa si adag u difaacay 10 Dollar oo laga qaado dadka ka soo dega ama ka dhoofaya madaarrada wadanka oo aanay u xalaalayn Golaha Wakiiladdu.
Wasiirku waxa uu sheegay in 10-kan dollar laga qaado dhammaan dalalka mandaqadda isla markaana uu waajibiyay wax uu ugu yeedhay sharci caalami ah oo dastuurka Somaliland aqoonsan yahay. Wasiir Maxamuud Xaashi waxa uu sidaasi ka sheegay shalay mar uu hortagay Guddi hoosaadka ilaalinta Hantida qaranka ee Golaha Wakiiladdda, iyadoo uu Gudidaasi warbixin ka siiyay waajibaadka shaqo ee wasaaradiisa iyo lacagtaasi tobanka dolar ah-ba.
“Wasaaraddan aan Qaranka uga mas’uulka ahay, waxay ku shaqaysaa siyaasadda xukuumadda oo ujeedadeedu tahay in Madaaradda dalka guud ahaan ay gaadhsiiso horumarka ay gaadheen dunida kale, dhinaca amniga iyo nooc kasta oo uu yahay oo ay ku jirto wadooyinka ay diyaaradu ku soo dagaan,”ayuu yidhi Wasiirka Duulista. Wasiirka oo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi “Waxaanu dayactir la taaban karo ama intii ay Somaliland jirtaya aan dib loo hagaajin Madaarada Hargeysa iyo Berbera dhabbooyinkooda (Run-way-yadooda), taasina waa ta dhiiri-galisay in diyaaraddo aan markii hore iman jirin dalkeena ay yimaadaan.
Diyaarado waaweyn marka madaarrada la qiimanayo wax lagu qiimaynayo waxaa lagu qiimeeyaa waa xeer caalami ah oo la isla yaqaano, wax aanu qaadanay shaqaale Jaamiciyiin ah, maadaama ay ragii waaweynaa gaboobayaan inay dhalinyaradaasi aqoonta kale hadhaan, waxaanu guud ahaan kor-u-qaadnay hawlihii garoonada haddii ay tahay amniga, shaqaalaha iyo madaarrada, taasi waa ta dhiirigalisay in diyaaradii Itoobiya Airline ay dib u bilawdo hawsheedii.” “Waxa iman doona dhawaan diyaaradaha Turkiga iyo Kiiniya, markii ay ogaadeen heerka aynu gaadhsiinay madaarrada mudadii aanu xilka haynay xukuumadda Siilaanyo ama noo suuroobay ayaa keenay in ay soo dhiiradaan,”ayuu yidhi Md. Maxamuud Xaashi Cabdi. Wasiirka Duulistu waxa uu ku dooday inaanay dhimeen lacago badan oo uu tilmaamay inay hore wasaaraddu u qaadi jirtay, waxaanu yidhi “Waxaanu dhinay lacago badan oo markii hore la qaadi jiray wax lacag ah oo Wasaaradu qaadanaa ma jiro oo aan ahayn saddexdii doolar ee la qaado oo loo dhigi mishiinada, labo doolar, waxaa ka shaqeeya shaqaale gaadhaya ilaa konton qof oo Jaamiciyiin ah ka u yarina qaato ilaa 400 doolar, sanadkanna in loo kardhiyo la filaayo dhawaan. Aqoon yahanadan waxaanu rajaynaynaa inaanu shaqaale joogto ah ka dhigno.”
“Lacagtaa tobanka doolar ah oo la bilaabay bishii sideedaad ee sanadkii hore waxaa qaada shariikadda wadaniga ah ee (NAASHA), waxaanay ku maamushaa daryeelka mishiinadda iyo hawlaha kale. Tobankan doolar wadamadda jaarka oo dhana waa lagu qaadaa, tobankaa doolar ee amniga adeegyadiisa ah waxaa jideeyay xeerka caalami ah oo uu dastuurkeenu ogol yahay. lacagtaa tobanka doolar ah Wasaarad waxba kagama soo baydhaan marka laga reebo in aanu ogolaanay mooyee in shaqada lagu qabto iyo danta ugu jirta Somaliland aanu ogaanay ayaanu Wasaarad ahaan ogolaanay sidan ay saxaafada iyo dadka qaarkii uga hadlayaana maaha wax jira,”ayuu yidhi Md. Maxamuud Xaashi. Wasiir Maxamuud Xaashi waxa uu difaacay lacago laga qaado dadka ka dhoofaya madaaradda iyo kuwa ka soo degaya, waxaanu yidhi “Waxaa lagu maamulaa arrimo badan oo sumcadeena kor u kiciyay xukuumad ahaan aanu dan u aragnay dhawaana aanu golaha hor keeni doono si xeer loogu sameeyo, waana garawsanahay in lacag kasta uu xeer jideeyo duruufihii iyo kala guurkii baana nagu keenay waana lacag adduunka oo dhami qaado, xeerar aanu golaha horkeeni doono ayaan Golaha Wakiiladu ansixiyay maahee madaarradu waxay la mid yihiin dekedaha wax aanu ku tallo jirnaa in aanu sanadka soo socda madaxbanayno. annagoo waajibinayna shaqaalaha madaaraduna waa sidaa kuwa dekada oo kale wakhti badana way shaqeeyaan ilaa afar iyo toban saac saddexda doolar baana kharashaadka badan naga daboola.” Geesta Kale xubno ka mid ah Xildhibaanadda Gudi Hoosaadka ilaalinta hantida qaranka ee wakiiladda ayaa su’aalo kala duwan waydiiyay, waxaanu Wasiirku uga jawaabay su’aalahoodii waxaanu sheegay inuu Sabtida fooda inagu soo haysa hor iman doono Goleweynaha wakiiladda. xildhibaan Maxamed Cali Xirsi oo ku hadlayay magaca Gudidaasi ayaa Wasiirka uga mahad celiyay sida uu u soo ajiibay codsigoodii la xidhiidhay inuu horyimaado Gudidaas.
Previous PostMaayarka Ceel Afweyn Oo Xilkii La wareegayNext PostXildhibaano Ka Wada Tirsan Guddi Oo Isku Maan-dhaafay Kulan ay la Yeesheen Wasiirka Duulista	Blog